၃ မိနစ်အတွင်းမှာ ရောင်းကုန်သွားခဲ့တဲ့ OnePlus ရဲ့ Bullets Wireless
6 Jun 2018 . 10:01 AM
OnePlus ရဲ့နာမည်ကြီး Flagship Killer တွေက နှစ်တိုင်းလိုလို ဈေးကွက်ထဲမှာ စိတ်ဝင်စားမှုအများကြီးရတဲ့ စမတ်ဖုန်ုးတွေပါ။ OnePlus က ၂၀၁၈ အတွက်တော့ OnePlus6ကို ပွဲထုတ်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
OnePlus6နဲ့အတူ မိတ်ဆက်ခဲ့တာကတော့ OnePlus Bullets Wireless Earbuds တွေပါ။ OnePlus ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Wireless Earbuds ဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ OnePlus ရဲ့ နာမည်ကြီး Bullets တွေနဲ့ နာမည်တူပေမယ့် Wireless Version ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီ OnePlus က အသံပိုင်းအတွက် နည်းပညာပိုင်းမှာ အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။
Boom! Sold out in Europe! 🔥 https://t.co/dKkh2UYxVY
— Carl Pei (@getpeid) June 5, 2018
OnePlus ရဲ့ Bullets Wireless Earphones တွေကို Europe မှာ စတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ စတင်ရောင်းချတဲ့အချိန်ကစလို့ ၃ မ်ိနစ်အတွင်းမှာပဲ OnePlus ရဲ့ Website မှာ Out Of Stock ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ OnePlus ကုမ္ပဏီရဲ့ Co-founder ဖြစ်သူ Carl Pei ကတော့ Ecropean Stock အားလုံး ၃ မိနစ်အတွင်း ရောင်းထွက်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာကို Twitter မှာ Tweet တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ OnePlus Bullets Wireless တွေကိုတော့ $69 နဲ့ရောင်းချပေးတာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း မကြာခင်ဝယ်ယူလို့ရနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာရင်တော့ ခန့်မှန်ဈေး တစ်သိန်းဝန်းကျင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။
၃ မိနဈအတှငျးမှာ ရောငျးကုနျသှားခဲ့တဲ့ OnePlus ရဲ့ Bullets Wireless
OnePlus ရဲ့နာမညျကွီး Flagship Killer တှကေ နှဈတိုငျးလိုလို ဈေးကှကျထဲမှာ စိတျဝငျစားမှုအမြားကွီးရတဲ့ စမတျဖုနျုးတှပေါ။ OnePlus က ၂၀၁၈ အတှကျတော့ OnePlus6ကို ပှဲထုတျမိတျဆကျခဲ့ပါတယျ။
OnePlus6နဲ့အတူ မိတျဆကျခဲ့တာကတော့ OnePlus Bullets Wireless Earbuds တှပေါ။ OnePlus ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Wireless Earbuds ဖွဈတာကွောငျ့ စိတျဝငျစားမှုတှမွေငျ့တကျခဲ့ပါတယျ။ OnePlus ရဲ့ နာမညျကွီး Bullets တှနေဲ့ နာမညျတူပမေယျ့ Wireless Version ဖွဈသှားတာနဲ့အညီ OnePlus က အသံပိုငျးအတှကျ နညျးပညာပိုငျးမှာ အဆငျ့မွှငျ့တငျခဲ့ပါတယျ။
OnePlus ရဲ့ Bullets Wireless Earphones တှကေို Europe မှာ စတငျရောငျးခခြဲ့ပါတယျ။ စတငျရောငျးခတြဲ့အခြိနျကစလို့ ၃ မိနဈအတှငျးမှာပဲ OnePlus ရဲ့ Website မှာ Out Of Stock ဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။ OnePlus ကုမ်ပဏီရဲ့ Co-founder ဖွဈသူ Carl Pei ကတော့ Ecropean Stock အားလုံး ၃ မိနဈအတှငျး ရောငျးထှကျသှားပွီဖွဈတယျဆိုတာကို Twitter မှာ Tweet တငျထားခဲ့ပါတယျ။ OnePlus Bullets Wireless တှကေိုတော့ $69 နဲ့ရောငျးခပြေးတာဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး မကွာခငျဝယျယူလို့ရနိုငျမယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံကိုရောကျလာရငျတော့ ခနျ့မှနျဈေး တဈသိနျးဝနျးကငျြခနျ့ရှိနိုငျပါတယျ။